Akhri: 12 Dalladood oo diiday warqad kasoo baxday wasaaradda Waxbarashada Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: 12 Dalladood oo diiday warqad kasoo baxday wasaaradda Waxbarashada Somalia
Mareeg.com: Waxaa maanta Muqdisho markale ku shiray 12 dalladood oo ka shaqeeya waxbarashada, ayna hoos yimaadaan ilaa 817 dugsi kuwaa oo isugu jira Hoose/Dhexe/Sare iyo kuwo xirfadeed, kuna kala yaalla caasimadda iyo gobollada dalka.
Dalladahan ayaa ka carrooday warqad shalay kasoo baxday wasiir ku xigeenka wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, Xaamud Cali Xasan, kaasoo warqad ogeysiis Imtixaan mideyn ah warbaahinta u mariyey Iskuullada dalladahaan hoos yimaadaan.
Dalladaha ayaa sheegay in ardayda dhameysatay daraasadda Wabarashada ee Sannad Dugsiyeedka ay yihiin; 287.000 arday oo 131,000 oo ka mid ah ay yihiin Gabdho.
Dalladahan ayaa ka warbixiyey soo gaba-gabeynta Sanad-dugsiyeedka 2014/2015 iyo xaaladda Waxbarasho ee dalka iyo aragtidooda ku aaddan in Imtixaan midaysan laga qaado iskuulada waxbarashada Soomaaliya.
Waxaa kulanka ka hadlay, Maxamed Cali oo ka socday Dalladda SAFE, wuxuuna sheegay in muddo 25-sano ah ay gacanta ku hayeen Waxbarashada dalka, aysanna maanta ogolaan doonin in loo gacan-dhaafo howlaha Waxbarashada ay mudadaas soo wadeen.
Wuxuu tilmaamay in wasaaraddu hadli karto marka ay diyaariso arday iyo manhaj, wuxuuna yiri “Arday loo barbaariyay hannaan Waxbarasho loona sameeyey Manhaj uu wax ku barto marka ay Wasaaradda sameeyso ayay ka hadli kartaa arrimo Waxbarasho”
Sidoo kale, waxaa kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Muxyadiin Cumar Jimcaal oo ka socday Dalladda FPENS oo sheegey in arrimo fara badan oo jira awgood aysan suuro-gal ahayn in xilligan la qaado Imtixaan mideysan.
Muxudiin ayaa hoosta ka xariiqay inay arintaan kala hadleen Wasaaradda waxbarashada iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowadda Somalia iyo baarlamaanka; isagoo xusay inay u gudbiyeen aragtidooda ku aaddan in la qaado Imtixaan mideysan.
Sidoo kale, waxaa goobta ka hadlay C/qaadir Ibraahim Gacal (Abkow) oo ka socday bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, wuxuuna yiri “Haddii aan nahay Bulshada Rayidka ah waxaan diyaar u nahay inaan idiin la abaabulno bannaanbxyo ku aaddan in xiligaan aysan suuropgal ahayn in la qaado Imtixaan mideysan”
C/qaadir Ibraahin Gacal (Abkow) ayaa u soo jeediyay Dalladaha Waxbarashada dalka inay isku duubnaandaan oo ay iska ilaaliyaan kuwa doonaya inay kala qaybiyaan.
Diini Axmed Diini oo ku hadlayey magaca SOSCENSA ayaa isna ka sheegay kulanka in mar la fiiriyo Caalamka aysan wax shaqo ah ku lahayn dowladuhu Waxbarashada gaar loo leeyahay, balse ay u jeedin karaan talooyin ku aaddan hannaanka goobaha laga dhisayo dusgiysada waxbarashada iyo wixii kale ee ay dowladda uga baahan yihiin.
Diini ayaa intaas raaciyay in Dalladda SOSCENSA ay cabashadooda gaarsiin doonaan baarlamaanka iyo mas’uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya.
Dalladaha kulanka ka qaybgalay shirkaan waxey kala yihiin:
1- SAFE Schools Association for Formal Education
2- FENPS Formal Education Network for Private Schools
3- SOFEL Somali Formal Education Link
4- SOFE Schools Organization for formal Education
5- FPNES Formal Private Education Network in Somalia
6- SOFEN Somali Formal Education Network
7- SOFPEN Somali Formal Private Education Network
8- ABUHA Academic Private Education Umbrella in Horn Africa
9- SEDA Somali Education Development
10- MEU Al ma’ m un Education Umbrella
11- SNEFA Somali Network Education For All
12- SONI Somali Network Institute.
Dalladahan ayaa sheegay iney imtixaanka u diidayaan sabahaha hoos ku xusan:-
1. Xaaladda nabadgeliyo ee dalka ka jirta aawgeed.
2. Iyadoo aysan jirin diyaargarow ku filan oo imtixaan mideysan lagu qaadi karo.
3. Iyadoo uusan weli jirin xeerkii waxbarashada gaarka loo leeyahay.
4. Iyadoo uusan jirin Manhaj mideysan oo dhameystiran.
5. Imtixaanka oo hal mar aan wada-gaari karin meelaha ay Iskuuladu ku yaalaan.
6. Iyadoo uusan jirin imtixaan mideysan oo ay Wasaaradda iyo Dalladaha ku heshiiyeen.
Shalay oo aheyd May 13, 2015 ayaa wasaaradda Waxbarashadu soo saartay qoraal ay iskuullada, ardayda iyo waalidiinta ugu sheegayaan in 30 May la qaadayo imtixaan mideysan, ardaygii geli waayana uusan heli doonin shahaadada Wasaaradda Waxbarashada.
Ku Xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo gaaray Kismaayo
Jawaari: Weli Dowlad Goboleed ma jirto ee waa maamullo KMG ah